सूर्य कर्पोरेशनले गर्यो भिसा कन्सल्टेन्सीका नाममा अवैध धन्दा | Nagarik Khabar - नेपाली जनताको खबर​
प्रशोधित पानीको मूल्य निर्धारण
अटोमेटिक पेस्तोल सहित एक जना पक्राउ
भदौ १५ सम्मका लागि शिक्षण संस्था बन्द, परीक्षा स्थगित
सीमा नाकामा थप कडाई गर्ने सरकारको निर्णय
साउदीमा ज्यान गुमाएका नेपालीका परिवारलाई सहयोग
यस्तो व्यवस्था गरे कलकारखाना सञ्चालन गर्न सकिने !
access_time२०७६ साल कार्तिक २८ गते, बिहीबार ०५:५१ PM chat_bubble_outline Comments folder_open मुख्य खबर​ प्रवास​ समाज
काठमाडौं । सूर्य कर्पोरेसनले भिसा कन्सल्टेन्सीका नाममा जापानमा अनधिकृतरुपमा मानिस पठाउने गरेको खुलासा भएको छ । नेपालमा सूर्य कर्पोरेसनका सञ्चालक शम्भु लामिछानेले जापानमा हुने विभिन्न कार्यक्रमका साथै अन्य समयमा पनि अनधिकृतरुपमा मानिस पठाउने गरेको तथ्य फेला परेको हो ।
काठमाडौंको पुतलीसडकमा रहेको कार्यालयमा मानिस बोलाएर भिजिट भिसा मिलाइदिने भन्दै शम्भु लामिछानेले लाखौं रुपैयाँ असुल्ने गरेका छन् । एक जनाको १२ लाख ५० हजार रकम लिने गरेको लामिछानेले स्वीकार गरेका छन् ।
जापानमा आयोजना हुने अवार्डका नाममा दर्जनौँ व्यक्तिलाई कलाकार बनाएर भिजिट भिसामा लामिछानेले पठाउने गरेका छन् । कलाकारको जम्बो टोलीमा मिसाएर जापान पुगेकाले शरणार्थी बनेर जापानी अध्यागमनमा निवेदन दिनेे गरेकाे अाराेप समेत लाग्दै अाएकाे छ ।
लामिछानेले सन् २०१८ मा दर्जनौँ व्यक्तिबाट करोडौँ रकम लिएका आरोप लागेको छ । विभिन्न कलाकारको आवरणमा उनले 'मानव तस्करी'को पुरानै काम निरन्तर गरिरहेका छन् । जापान जान इच्छुक एक व्यक्तिले आफूसँग लामिछानेले १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ माग गरेको नागरिक खबरलाई जानकारी दिए ।
भिजिट भिसामा जापान पुगेका व्यक्तिलाई लामिछानेले नै शरणार्थीको रुपमा कागज मिलाउन सहयोग गर्ने गरेका छन् । सूर्य कर्पोरेसनले जापान पुगेपछि शरणार्थी भिसा आवेदन गरिदिएको कागज पनि नागरिकखबरले प्राप्त गरेको छ । यस पटक पनि नोभेम्बरको अन्तिममा दर्जनौँ व्यक्ति लैजाने कर्पोरेसनको तयारी छ ।
केही समयअघि खोटाङका राई थरका एक युवा हानेदा विमानस्थलबाटै अध्यागमनले फिर्ता गरेको नेपालस्थित अध्यागमन स्रोतले जानकारी दिएको छ । आफ्नो गाउँका तीन जना साथीहरु कर्पोरेसन मार्फत जापान गएपछि उनी पनि जापानका लागि लाखौँ रुपैयाँ लामिछानेलाई बुझाएर हानेदा विमानस्थलसम्म पुगेका थिए । तर त्यहाँको अध्यागमनले उनलाई फिर्ता पठायो ।
सूर्य कर्पोरेसनका सञ्चालक लामिछानेले आफूले जापानको भिसामा सहयोग गरेपनि कसैलाई पनि गैरकानुनी रुपमा जापान नपठाएको दावी गरे । कलाकार बाहेकका अन्य मान्छे नलगेको उनको भनाइ छ ।
लाखौं रकम लिएको प्रमाणसमेत नागरिकखबरसित रहेको र त्यसबारे के हो त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले केही बताउन चाहेनन् ।
सूर्य कर्पोरेशनको अवैध काम: जापान पुर्याउन १२ लाख, पुगेपछि शरणार्थी ! (अडियोसहित)